काठमाण्डौ । थाइल्याण्डको बैंककमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई अमेरिकाको इन्टरनेसनल ब्रान्ड कन्सल्टिङ कर्पोरेस (आईबीसी) ले एसियन्स मस्ट ट्रस्टेड कम्पनी अवार्ड–२०१९ बाट सम्मानित गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संचालक समितिले कम्पनीमा नायव महाप्रन्धक पदमा कार्यरत शरण रेग्मीलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ । स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी विगत २७ बर्षदेखि निर्जीवन बीमा तथा वित्त क्षेत्रमा कार्यरत रेग्मीले तत्कालिन एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट् लि. (हाल सनराईज क्याटिलमा) २ बर्ष,...
आईजीआईको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड (आईजीआई) ले आइतबार सेयर मूल्यमा समायोजन गरेको छ । मूल्य समायोजनपछि कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३६२.८६ पैसा हुन आएको छ । बैंकले ५ प्रतिशत बोनस सेयर समायोजन गर्न ४२४.७६ पैसालाई आधारमूल्य तोकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि गत जेठ १० गते ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको...
आइजीआईद्वारा विद्यार्थीलक्षित बिमालेख जारी, के-के छन् विशेषता ?
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कक्षा १ देखि कक्ष १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी आइजीआई स्टूडेन्ट पोलिसी (आइजीआई विद्यार्थी बीमालेख) शुरु गरेको छ । यस्तो बीमालेखको शुभारम्भ कम्पनीका संचलक प्रतापजंग पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरे । आइएमई जनरल...
आइजीआईद्वारा ८०% हकप्रदको बिक्री खुल्ला
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमीटेड पुस १७ गते(आज)देखि ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४३ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको हो । हकप्रद खरीद गर्न इच्छुकले आगामी माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । मंसिर ८ गतेसम्म कायम कम्पनीका सेयरधनीले हकप्रदका लागि आवेदन दिन...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कम्पनीको ४४औं शाखा काठमाण्डौंकोे किर्तिपुरमा मंसीर २८ गतेदेखि संचालनमा ल्याएको छ । शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागांईले गरे । सो अवसरमा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा अन्य संचालक समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । समारोहमा स्थानिय...
आइजीआईको ८०% हकप्रद पुस १७ देखि
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई)ले आगामी पुस १७ गतेदेखि ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । यो बिमा कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ४३ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको हो । मंसिर ८ गतेसम्म यो कम्पनीको सेयरधनी बनेकाहरु हकप्रद सेयर खरीदका लागि आवेदन दिन योग्य मानिनेछन् । हकप्रद सेयरको...
नेपाल बैंक र आइजीआईबीच बीमा सम्झौता
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड बीच दुर्घटना बीमा तथा औषधोपचार बीमा सेवाको बिषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले...
आइजीआई र नेशनल मेडिकल कलेजबीच सम्झौता
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य सेवामा ग्राहकको पहुँच सहज र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमिटेडले नगदरहित अन्तरंग सेवा स्वास्थ्य बीमा योजना अगाडि ल्याएको छ । यो सेवालाई प्रादेशिक तहमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेशनल मेडिकल कलेज प्रा.लि. वीरगञ्जबीच एक समझदारी पत्रमा...
आइजीआई र सीपी अस्पतालबीच नगदरहित सेवा प्रवाहको सम्झौता
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य सेवामा ग्राहकको पहुँच सहज र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र सि.पि.अस्पताल प्रा.लि., धनगढी, कैलालीबीच आफ्ना ग्राहकहरुलाई नगदरहित अन्तरंग सेवा प्रदान गर्ने सहकार्यका लागि आपसी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा सेवा...
आइजीआईको सीइओमा युगेशभक्त नियुक्त
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ सोही कम्पनीको महाप्रबन्धत्रक तथा का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत थिए । श्रेष्ठ २३ बर्षदेखि निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । बीमा क्षेत्रलाई नै आफ्नो कर्मथलो बनाएर यही क्षेत्रको...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमिटेडले आफ्ना थप दूई शाखा कार्यालयहरु चितवनको रत्ननगर टाँडी र नवलपरासीको कावासोतीमा श्रावण ९ गते उद्घाटन गरेको छ । कम्पनीको टाँडी शाखाको उद्घाटन रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरे...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा कूल बीमा शुल्क रु.१ अरब ९२ लाख आर्जन गर्न सफल भएको छ । उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुसंग शुभकामना आदानप्रदान गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा एक अरब ९२ लाख बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएकोमा खुशी...
आइजीआईलाई ८० % हकप्रद निश्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमीटेडलाई ८० प्रतिशत हकप्रद निश्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीको ८० प्रतिशत हुन आउने ४३ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर आफ्ना सेयरधनीलाई बिक्री गर्ने अनुमति पाएको हो । कम्पनीको हकप्रद निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल...
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ र फन्ड–२ को सेयरमा लगानी बढ्यो, न्याभ कति ?